Meksika: Hanohy ny Asany ny Orinasam-Pifandraisan’ireo Vazimba Teratany — Hatreto Aloha · Global Voices teny Malagasy
Meksika: Hanohy ny Asany ny Orinasam-Pifandraisan'ireo Vazimba Teratany — Hatreto Aloha
Voadika ny 06 Mey 2018 3:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, 한국어, русский, Italiano, Español
Sary avy amin'ny Rhizomática Wiki nampiasàna lisansa Creative Commons.
Natrehan'ny Indigenous Community Telecommunications (ICT), fikambanana sivily iray ao Meksika, ny ady goavana iray teny amin'ny fitsaràna hitakiana ny zon'ny vondrom-piarahamonin'ireo vazimba teratany ho afaka hametraka sy hitantana tambajotranà fifandraisana finday ary aterineto.
Nahazo fiarovana manokana araka ny lalàna (na amparo, amin'ny teny espaniola) ny ICT, izay manome tolotra feo sy angona amin'ny sandany mirary ho an'ireo faritra lavitra any atsimon'i Meksika, fiarovana izay mametraka azy tsy handoa hetra manodidina ny iray tapitrisa pesos (eo amin'ny US $50,000) mba hampiasàna ny onjampeo ho an'ny asany. Amin'ny ankapobeny dia ny Ivontoerana Federaly misahana ny Fifandraisandavitra ao Meksika (ilay sampana mpandrindra ny fandefasana onjampeo sy fifandraisandavitra) ho an'ireo vondron'orinasa no mametraka io hetra io. Fikambanana tsy mitady tombony ara-bola ny ICT.
Namoaka didy ny Fitsaràna Iraisana momba ny Olana ara-Pitantanana, Voatokana ho an'ny Fifaninanana ara-Toekarena, Onjampeo sy Fifandraisandavitra fa tsy manavaka ny ICT tsy handoa vola akory io, fa maniraka kosa ny Ivontoerana Federaly misahana ny Fifandraisanvaditra mba handinika izay hetra ilaina takiana. Amin'ny maha tsy mikatsaka tombony ara-bola azy, milaza ny ICT fa tsy tokony hitovy amin'ireo mpanome tolotra natao hakàna tombony ara-barotra ny fomba hijerena azy.
Ao anatin'ilay didy, eken'ny Fitsaràna fa ireo tolotry ny ICT dia mifandraika amin'ny fiarovana ny zo maha-olombelona ireo vazimba teratany, isan'izany ny fahalalahana maneho hevitra. Ekeny ihany koa fa tsy maintsy ampiharina ny fotokevitra pro homine (pro persona) rehefa mijery ny olana momba ny zon'olombelona mba handrisihana ny fiarovana midadasika kokoa ary anatin'ny fotoana mitovy ny zon'ireo vondron'olona sy ny isambatan'olona.
Ireo fikambanana, toy ny Rhizomática sy ny Tambajotra ho an'ny Hamaroana, Fitoviana ary Fampandrosoana Lovainjafy izay nanampy tamin'ny fametrahana ny ICT, dia namoaka fanambaràna iray an-gazety nankasitrahany ny fanapahankevitry ny Fitsaràna sy nisaorany ireo mpanohana azy izay niara-dàlana tamin-dry zareo tamin'io dia lavitrezaka nataony io.
Tsy fitoviana sy fanavakavahana ao anatin'ny dingana fizaràna fahazoandàlana.
Global Voices (GV) niresaka tamin'i Erick Huerta, lefitry ny mpandrindra ankapobeny ao amin'ny Tambajotra ho an'ny Hamaroana, Fitoviana ary Fampandrosoana Lovainjafy, mpanolotsaina no sady mpahay resaka lalàna ao amin'ny ICT, momba ireo fanamby ho atrehana:
Tsapanay fa kihon-dàlana goavana ilay didy navoakan'ny Fitsaràna tamin'ny resaka zom-pifandraisan'ireo olona sy vondrom-piarahamonina vazimba teratany, ary ny fomba tokony hanatanterahan'ny mpandindra [ny Ivontoerana Federaly misahana ny Fifandraisandavitra] ny asany.
Ny Artikla 1 ao amin'ny lalàmpanorenana dia milaza mazava tsara mihitsy fa ny olona rehetra dia tokony hisitraka ny zo maha-olombelona, tsy asiana fanavahana, ary raha misy mampisalasala, tsy maintsy aroso ny fanazavàna ny lalàna mba ho fomba iray hampiroboroboana ny fiarovana midadasika kokoa ny zo maha-olombelona. Io fanazavàna ny lalàna io dia tsy maintsy ataon'ny fahefam-pitsaràna, ary koa ireo sampan-draharaha mpanatanteraka sy mpandrindra.
Tena tsara araka izany ny didy navoakan'ny Fitsaràna tamin'io, satria milaza amin'ireo mpandrindra hoe manana andraikitra izy ireo hanazava ny lalàna mba ho fiarovana ny zo maha-olombelona, ary handinika ny toedraharaha manokan'ireo vazimba teratany sy ny zon'izy ireo manokana amin'ny resaka fifandraisandavitra.
Amin'ny teny hafa, lazain'ilay didy fa tsy tokony ho henjana amin'ny fampiharana ilay lalàna momba ny hetra ireo mpandrindra [amin'ity tranga ity, iray izay mamaritra ny tokony ho aloa amin'ny fampiasàna ny halavan'onjampeo] izay mety hanakana zo fototra iray.
Ho anay, ny tsy maintsy handoavana iray tapitrisa pesos dia mety hidika hoe tokony hatsahatray ny asa ary avy eo mety ho lavina ny zon'ireo vondrom-piarahamonina amin'ny resaka fifandraisana, noho ny olona ara-pitantanana tsotra fotsiny izao.
Ilay fehezanteny dia milaza hoe “Afaka asiana fanazavana daholo ny lalàna tsirairay. Ankoatra izay, ireo lalàna momba ny hetra dia arahana fanazavana hentitra, saingy tsy midika izany fa tsy nasiana fanazavàna izy ireny.”
Afaka ampiharinao amin'ny fomba henjana ny lalàna, tsy maintsy jerenao ny fipetrak'izy ireny ao anatin'ny rafitra misy, hoe mampitovy ny rehetra ve sa manavakavaka.
Ho an'ny Huerta, efa nandroso sahady vahaolana iray ilay rantsana mpandrindra mba ho fanazavàna ilay lalàna resahana eto, saingy tsy ekena ny fanavahana tsy handoa hetra mandra-pahazon'ny ICT ny sata “mpisitraka nahazo alàlana” avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fitantanana ny Hetra, omena ireo fikambanana sivily na vondrom-pikambanana mandray fanampiana tsy andoavana hetra. Raha jerena ny toedraharaha, milaza ny Huerta fa mety ho voatery ny ICT handà ilay baikon'ny Ivontoerana.
Fanampin'izany, nametraka fangatahana iray hafa momba ny fiarovana manokana araka ny lalàna ny ICT, manoloana ireo tsy fitoviana sy fanavakavahana ao anatin'ny dingana fanomezana fahazoandàlana (lisansa) amin'ny fandefasana onjampeo sy fifandraisandavitra.
Para radiodifusión, no hay pago del derecho por el uso del espectro, ni en concesiones sociales ni en las comerciales. Su derecho se paga en tiempos fiscales [espacios de transmisión que ocupa el Estado Mexicano].
Ho an'ny fandefasana onjampeo, tsy misy ny fandoavana vola ho an'ny zo hampiasa halavan'onjampeo, na ny lisansa ho an'ny vondrom-piarahamonina, na ho an'ireo fampiasàna hakàna tombony ara-barotra. Aloa amin'ny endrika ampaham-potoana ny zon'izy ireny, izay natokana ho an'ireo tolotra ho an'ny daholobe alefa amin'ny onjampeo.
Ho an'ireo onjampeo anà vondrom-piarahamonina sy vazimba teratany, tsy misy ny fandoavana vola amin'ny fandefasana tolotra ho an'ny daholobe amin'ny onjampeo. Araka izany, tsy tokony hisy vola takiana ho an'ny fampiasàna ny halavan'onjampeo ho an'ireo mpanome tolotra mitovy sokajy. Raha izay lojika izay ihany no ampiharina [hanomezana tolotra sosialy, ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ireo vazimba teratany], tsy maintsy mipetraka ny fepetra mitovy.
Indrisy anefa, marobe ireo ohatra izay, mba hanomezana tombony olona iray manokana manana tanjaka ara-toekarena goavana, dia toa mora ny zavatra rehetra, voahitsakitsaka hatramin'ireo fotokevitra mihitsy aza. Amin'ny raharaha hafa, na nisy aza ny famahàna olana naroson'ny lalàna, tahàka ny tranga manjo anay izao, dia tsy milefitra mihitsy ny manampahefana.
Maneho fanavakavahana ireny mason-tsivana ireny.
Ny hoavin'ny ICT, mijoro ho an'ny zon'ireo vazimba teratany
Tsy very sata ary nivoady ny hanohy hiady ho an'ny zon'ireo vazimba teratany ny ICT, fantatra amin'ny hetsika tsy miankina, manelingelina sy misy fahaizamamorona ataony, izay misoratra any anatin'ny soritrasan'ireo tetikasa teknolojikan'ny vondrom-piarahamonin'ny vazimba teratany, toy ny tambajotranà telefona finday ho an'ny vondrom-piarahamonina.
Huerta mino hoe:
Misy ireo maka toerana mba hanohana ny matanjaka. Fa izahay kosa hanaraka ny làlana tena ilaina, amin'ny fanantenana hoe any am-parany any, dia homena lanja ny zon'ireo vahoaka sy vondrom-piarahamonina vazimba teratany.